February 2015 – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
Deemsa isaanii kana irratti kan taabota sana qabee jiru hordofaa amantaa biro yoo ta’u, innis sammuu isaa dhabee maraatee jira. Maraachuu isaatiin durattis “ Fuuldurakootii akka bakakkaa( qaqawweessaa) akka natti balaqqeessa’e deemuu hin dandeenye; maaloo taabota kana narraa fuudhaa” akka jedhe dubbachaa turuu isaa jecha isaa poolisiitti kenne irraa hubatamuu danda’eera.
Taabota sana baatanii deemuu waan dadhabeefis bosona magaala Baabboo bakka buufata konkolaataa duuba jiru keessa kaa’uun Konkolaataa ittiin baatan barbaadaa erga turanii booda deebi’anii kaasuuf yemmu jedhan akka ibiddaa akka isaan gube akka kaasuu dadhaban ibsaniiru. Bakki taabotichi taa’ee tures baalli naannoo sanaa gubatee akka ture argameera. Sana booda luboonni dhufanii kadhannaa taassisuun erga kaasanii booda yeroodhaaf Tsillaatii sana Mana kiristaanaa Qulqululluu Gabri’eelii fi Uraa’eelii akka taa’u taassisame” jedhu.
“ Waaqayyo hojii dinqii Isaa kan jalqabe har’a miti kan jedhan Qulqulluun Abbaan Keenya Heenook; Waaqayyo abbootii keenya Raajotarra bulee, boodarras Duukaabuutotarra bulee, bara beektotaas dinqii baay’ee hojjechaa tureera. Har’as Aanaa Baabboo Gambeel keessatti dinqiin kun mul’achuun isaa amantoonni irra caalatti akka cimanii fi amantaa isaaniitiin cimanii akka jiraatan kan taassisudha. Fedha Waaqayyoo ta’ee dinqii kana bakka kanatti natti agarsiisuu Isaatiin gammadeen jira, anis carroomeeran jedha” jechuudhaan ibsaniiru.
Namni maraachuu isaatiin ni gaddina; kadhannaas isaaf taassisna kan jedhan Abbaan keenya Heenook Dinqii Waaqayyo hojjete garuu ni ajaa’ibsiifanna jedhaniiru.
Akka ibsa Qulqulluu Abbaa keenya Heenookitti yeroo taabonni sun hatametti kiristaanonni naannoo sanaa gadda cimaa keessa turani; akka nama firri jalaa du’eettis uffata isaanii gadi garagalchanii boo’aa turaniiru; namoonni taabota sana hatanis Waajira Poolisiitti dhiyaatanii taaboticha akkamiin akka hatan, eenyu akka isaan kakaasee fi sababa maaliin hatuu akka danda’an jecha isaanii erga kennanii guyyaa sadi booda Shakkamaan inni tokko Maraatee jira jedhaniiru.
Yeroo sanatti “ Dhagni koo na gubate” jedhee uffata isaa of irraa baasuun qullaa isaa Mana murtiitti dhiyaachuuf yeroo jedhu Poolisiin mana murtiitti kan dhiyaachuu qabdu uffata uffachuudhaani” jedhee yeroo itti uffisuuf yaalutti uffata sana deebisee yeroo darbatu namni uffatichi tuqe “ Dhagni koo na gubate” jechuudhaan dhukubsatee guyyaa sadiif ciisee ture jedhaniiru.
Namni sun Maraatee uffata isaa of irraa baasuun qullaa isaa deemuu irratti dabalataan “Gubadhe” jedhee yeroo iyyutti bishaan dhagna isaatti yemmu naqan dhagna isaa irraa akka aaraatti hurkaa akka ture, innis ani gubadhe; ka nana arge akka taabota hin tuqne; ani kanan akkana ta’e taabota Waaqayyoo waanan hateefidha jedhee bakka kiristaanonnis namoonni amantaa biraa qaban argamanitti ragaa ba’aa ture jedhaniiru.
Mana Kiristaanaa dadhabsuu fi amantoota abdii kutachiisuuf alaanis keessaanis diinni yeroo itti baay’ate bara dhumaa waan ta’eef kiristaanni martuu mana kiristaanaa waliin ta’uudhaan akka eegan Imaana koon dabarsa jechuun Abbaan keenya Heenook ergaa isaanii dabarsaniiru.
Dursaan Lubootaa Aanaa Baabboo Gambeel Luba Girmaa Ittaanaas Hattoota keessaa lamaan isaanii poolisii, dhimma nageenya naannoo fi carraaqqii uummataatiin to’annaa jala oolanii akkamiin akka hatan jecha isaanii kennanniiru. Keessattuu hattuun inni adda dureedhaan dhimma kana raawwachaa ture kan amantaa biraa hordofu yoo ta’u, jecha isaa poolisiitti kennee guyyaa sadi booda maraateera jedhaniiru. Namni kun maraachuu isaas magaala Baabboo Gambeel keessaatti argineerra; yeroo uffata itti uffisanis “Gubadhe” akka jedhe of irraa baaseet darbata jedhaniiru.
Beetaliheemii Mana Kiristaanaa Daamotaa Dabra Haayil Qulqulluu Rufaa’eel karaa hattoonni cabsanii seenanii Tsillaatii baasan.
Qorataa Poolisii dhimma kana qorachaa ture Itt/Saaj. Daanyee Indaaluu bilbilaan kan haasofsiisne yoo ta’u, isaanis haala raawwannaa yakkichaa fi yakkamtootaa haala armaan gadiitiin nuuf ibsanii jiru:-
Galmeen yakkaa Poolisii (CR) aanaa Baabboo Gambeel galmee lakk 57/2007 akka ibsutti onkololeessa 19 bara 2007 halkan keessaa tilmaamaan naannoo sa’aatii 7 hanga 8 gidduutti Shakkamtoonni lama
(1). Abdii Mahaammadii fi
(2).Raamataa Bayyanaa jedhaman
Dukkana dahoo godhatanii Mana kiristaanaa Dabra Haayil Daamotaa Qulqulluu Rufaa’el Beetaliheemii cabsanii seenuudhaan tsillaatii kana hatanii kan deeman yoo ta’u, gara magaala Baabboo geessuun buufata konkolaataa duuba dhoksanii hordoffiin taabonni sunn argameera.
Shakkamtoonnis to’annaa jala oolanii jecha shakkamummaa isaanii bu’uura s/d/f/y keeaawata 27 tiin kan kennan yoo ta’u, yeroo jecha isaanii kennanis yakka kana akka raawwannuuf namoonnni (1) Jamaal Ayyaanaa fi (2) Xaahir teessoo jedhamanitu qarshii 500 (Dhibba shan) nuuf kennee taabonni sun ni gurguramaatii dhaqaa cabsaa nuuf fidaa jedhani jechuun dubbatani. Nutis jecha isaanii kana irratti hundaa’uun namoota caqasaman kanas to’annaa jala oolchinee yeroo beellamaatiin tursuun qorachaa kan turre yoo ta’u namoota lamaan kana irratti ragaa argachuu hin dandeenye.
Shakkamaan Raamtaa Bayyanaa garuu gocha hannaa kana waajjira poolisiittis ta’e mana murtiitti dhityaatee yemmu gaafatamu kana mane yoo ta’u, ragaadhaanis irratti mirkanaa’ee jira waan ta’eef manni murtii aanaa Baabboo Gambeelaa lakk. Galmee 04099 ta’e irratti dhaddacha gaafa 22/04/2007 ooleen murtee balleessummaa kennuudhaan hidhaa Waggaa sadiitiin adabeera jedheera.
Himatamaa Abdii Mahaammad ilaalchisee Itt. Saj. Daanyeen akka ibsanitti Shakkamaan kun waajjira Poolisiitti dhiyaatee bu’uura s/d/f/y keww. 27 tiin jecha amantaa isaa erga laatee booda waan mataa dabarsee/ Maraateef/ mana murtiitti dhiyaate jecha himatamummaa isaa kennuu dadhabeera. Jedheera.
Itt. Saj. Daanyeen akka ibsanitti shakkamaa Abdii Mahaammad kan jedhamu kun amma illee maraatee kan qullaa isaa daandiirra deemaa jiru yoo ta’u, taabota hateen gubadhe, dhagni koo na gubaa jira jedhee akka iyyaa ture, ammas akkasuma akka iyyaa deemu ibsee jira.
Taabonni hatame kabajaan bakka teessoo isaatti yemmu deebi’u uummanni haala kanaan bahee kabaje
Hattoonni kun namni nu argu hin jiru jechuudhaan Mana Waaqayyoo cabsanii seenuun Tsillaattii Ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Rufaa’eel kan mana kiristaanaa sana keessa jiruu fi qabeenyota biros hatuun Miliquuf ariifatanis akka yaada isaanii ta’uu dhiisee Taabonni Waaqayyoo Dinqii hojjechuudhaan Gara teessoo isaatti kabajaan deeb’ee jira.
Mana Kiristaanaa Daamotaa Dabra Haayil Qulquluu Rufaa’eelii kan haaraa ijaarame
Kutaan Qindeesaa Weebsaayitii afaan oromoo Kunis namoota Odeeffannoo nuuf kennuudhaan Qarqaarsa nuuf taassisan Keessaattuu Dursaa Phaaphaasii Kutaa Lallaba Biyaa Wallagga Lixaa qulqulluu Abbaa keenya Heenook, kutaa mana lubummaa Aanaa Baabboo Gambeel, Liqa Tiguhaan Luba Girmaa Ittaanaa waajjira Poolisii Aanaa Baabboo Gambeel, Itt. Saj. Daanyee Indaaluu, Waldaa Qulqullootaa Wiirtuu aanaa Baabboo Gambeeliin Galatoomfachaa Kiristaanni hundinuu caalmaan kadhannaa fi gaabbiidhaan Gara Waaqayyootti deebi’uun mana kiristaanaa isaa akka eege kiristaanummaa isaa cimsachuu qaba jenna.
Galanni Waaqayyoof haa ta’u,
Kadhaan Giiftii keenya Qulqulleettii Maariyaam
Egumsi Ergamaa Rufaa’eel nu irraa hin fagaatiin
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2015-02-26 14:34:222018-10-26 09:21:21Taabonni Hatame dinqii Hojjechuudhaan gara teessoo Isaatti kabajaan deebi’e
Itti aansuun Diyaabiloos “ Ergamtoota Isaa keessaa siif ergaatii; miilli kees dhakaadhaan akka hin rukutamneef (akka hin gufanneef) harka isaaniitiin si kaasu” jedhee kitaaba Isaa afuura of tuulummaatiin caqasuun Gooftaan keenya baaxii mana qulqullummaa Isaa irraa akka of darbatuuf caqasa isaa dogoggoraatiin Isa mooqsuuf yaale. Haa ta’u malee ammas Gooftaan keenya “ Waaqayyo kee hin qoriin jedhamee barreeffameera” jechuudhaan lammata saaphana badii isaa jalaa cireera ( Faar. 90:11 ; Se.Ke.de. 6:6)
Diyaabiloos yeroo sadaffaadhaaf kabajaa fi badhaadhina addunyaa agarsiisuudhaan Gooftaa keenyaan “ Kuftee yoo naaf sagadde kana hunda Siifan kenna” jechee jaalala qabeenyaa ( horii)tiin; waaqeffannaa waaqa alagaatiin kiyyoo keessa galchuuf yemmu yaalu yeroo sana Gooftaan keenya yaa seexana nana asii deemi “ Waaqa kee Gooftaadhaaf sagadi Isa qofas Waaqeffadhu” (Se.ke.de. 6:13) jedhamee barreeffameera jedhee yeroo deebisuuf diyaabiloosis abdii kutee injifatamee akka deemu taassiseera.
Jaalatamtoota Ijoolee afuuraa keenya
Bara kakuu duraa irraa eegalee raajonni qulqulloonni Waaqayyo irraa wanta tokko yemmu barbaadan bishaanii fi midhaan irraa of dhorkuun soomaan daanga’anii subaa’ee galanii yemmu Waaqayyoon kadhatan kadhaan isaanii fudhatama akka argachaa turan kitaaba qulqulluu irratti bakka adda addaatti barreeffameera; kanaanis raajichi Daani’eelii fi Izraan; akkasumas Musee fi Eeliyaas; Asteerii fi obboleessi ishee Mardookiyoos warra caqasaman keessaati. Gama biyyaatiin ammo Magaala Nanawwee yoo ilaalle waa’ee barbaachisummaa soomaa barumsa guddaa irraa arganna ( Ast. 4:1-4; Yon. 3:1-10)
Gooftaan Keenya Qorichi keenya Iyyasuus Kiristoosis kan hir’ate guutuuf, kan dhokate ifa baasuuf kan jal’ate soroorsuu (sirreessuuf) kan dhufe waan ta’eef “Seeraa fi Raajii raawwachuufan dhufe malee diiguuf hin dhufne” jechuun barsiiseera. ( Maat.5:17)
Diyaabiloos Gooftaa keenya hojjaa gabaabaadhaan gateettii dhiphoodhaan mul’atee dhaabbina Addaamiin yemmu ilaalu mala Addaam jalqabaa irratti fayyadame fayyadamuun Addaam lammaffaa kuffisuuf baay’ee dhama’eera. Haa ta’u malee malli Addaam jalqabaa irratti bare Gooftaa keenya Isa Addaam lammaffaa jedhame irratti hojjechuu hin dandeenye.
Gooftaan keenya diyaabiloosiin kan injifate waantota sadiin akka ta’e agarra. Isaan kunis;- Sooma, Kadhannaa fi Sagalee Waaqayyooti (Luuq. 4:1-13)
Gooftaan keenya qormaata gama diyaabiloosiin dhufan hunda kan deebise caqasa sagalee Waaqayyoo ta’e caqasa kitaaba qulqulluutiinidha. Diyaabiloosis isumaan nan waraana jedhee caqasa kitaaba qulqulluu fayyadameera. Haa ta’u malee caqasoonni inni itti fayyadame hiika sirrii fi qabiyyee afuuraatiin osoo hin ta’iin kaayyoo hammeenyummaa isaatiif akka isaaf tolutti oftuulummaa fi jaalala horiitiin kan itti fayyadame waan ta’eef madaala isaaf kaasuu waan hin dandeenyeef dhuma irratti injifatamee jira.
Jaalatamtoota ijoollee afuuraa keenya
– Soomni humna afuuraa diyaabiloosii fi meeshaalee dogoggorsaa isaa cabsinee ittiin gannudha.
– Soomaa fi kadhannaadhaan lubbuun madaa cubbuu irraa fayyiti.
– Soomaa fi kadhannaadhaan Waaqayyo wajjin wal qunnamuun ni danda’ama
– Walumaa galatti soomnii fi kadhannaan fedha foonii to’annaa jala oolchuudhaan lubbuun cimina, injifannaa fi ol’aantummaa akka argattu taassisa.
Egaa sababoonni gurguddoon akka sooma soomnu nu taassisan isaan kana yoo ta’u, raayyaalee baay’ee akka qaban immoo irraanfachuu hin qabnu. Yeroo soomaa:-
– Harki keenya kadhannaaf, hiyyeessota qarqaaruuf kan hiixataman
– Afaan keenya amantaa, nageenya, jaalala,tokkummaa fi obbolummaa kan lallabu
– Gurri keenya sagalee Waaqayyoo, wantoota gaarii fi dhugaa qofa kan dhagahan
– Ijji keenya gara hojii qulqullummaa qofa kan ilaalu
– Miilli keenya gara mana Waaqayyootti kan deeman ta’uu qabu. Afuuraa fi hubannaa kanneeniin sooma yoo soomne diyaabiloosiin mo’achuun keenya, Waaqayyoonis fakkaachuun keenya kan shakkisiisu miti.
Ji’a soomaa kana nagaan nu xumursiisee ifa du’aa ka’uu Isaatiin akka nu gahu eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta’u
Waaqayyo Itiyoophiyaa fi uummata ishee haa eebbisu! Ameen!
Dursaa Phaaphaasota Itiyoophiyaa
Dursaa Phaaphaasii Aksum Iceggee Teessoo Takla Haaymaanot
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2015-02-14 11:26:362018-10-26 09:21:22Sagalee Eebba Qulqulluu Paatiriyaarikii dursaa Phaaphaasota Itiyoophiyaa Abbaan keenya Maatiyaas waa’ee sooma Guddaa Gooftaa keenya Iyyasuus kiristoos ilaachisee kennan